खरायो र सिंह – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ८, २०७५
अचानक लाइन गयो । लोडसेडिङको तालिकाअनुसार ९.३० बजे जानुपर्ने, ८ बजे नै अँध्यारो भयो कोठा अनि घर, घरभन्दा बढी आमाछोरीको मुहार । मुहारभन्दा पनि मन ।
‘ड्याडी कथा सुनाउनू न..।’ त्यसपछि, टिभी हेर्दै गरेकी १३ वर्षीय छोरी यसो भन्दै मेरो कोठातिर लस्किन्, अल्छी मान्दै । ’नानी ! मैनबत्ती बालेर होमक गर है !’
मैंले केही भन्नुअघि नै उर्मिला बोली । आमाचाहिँको कुरा सुनेर म मनमनै खुब हाँसे ।
‘अँ, अस्ति जसरी सुत्न ?’ मेरो यो प्रश्न खस्न नपाउँदै नीना बोलिन्, ‘सुत्दिनँ के ड्याडी..कस्सम..!’
‘पक्का ?’’म ढुक्क हुन खोजेँ ।
‘पक्का ।’ उनले ? लाईले विस्थापित मात्र गरिदिइन् ।
‘ल सुन है त..! यो कथा हैन, तर कथा जस्तै जस्तै चाहिँ हो, हाम्रो पालाको कुरा !’
‘ओके ड्याडी’ यसो भन्दै उनी म बसेको खाटनजिकै आएर बसिन् । यति बेलासम्ममा उर्मिलाले सकिनै लागेको मैनबत्तीले कोठा उज्यालो पारिसकेकी थिइन् । अनि, मैंले कथा सुरू गरेँ ।
धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो…करिब ३३ वर्ष पहिलाको कुरा..! भदौको दोस्रो हप्ताको पहिलो दिन, अर्थात् आइतबार । ३–४ दिन पानी परेर रोकिए पनि फेरि आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको थियो । वादलजस्तै अनुहार लिएर जयकान्त झा सर हातमा लठ्ठी हल्लाउँदै कक्षा पस्नुभो ।
‘दीपक सरजस्तरी ड्याडी ?’ छोरीको जिज्ञासा !
‘अँ, त्यस्तै ! त्योभन्दा नि खतरा..।’ छोरी चुप, त्यसपछि । अनि म अघि बढेँ ।
हामीले सरको मुहार पूर्णिमाको चन्द्रजस्तो कहिल्यै देखेका थिएनौँ । हामी साथीहरूबीच कुरा पनि चल्थ्यो– ‘यो सरचाहिँ जन्मँदा रिसाएरै जन्मेको होला, हुर्कंदा नि रिसाएरै हुक्र्यो होला, पढ्दा नि रिसाएरै पढ्यो होला !’
अझ थाहा छ ?
कुनै कुनैले त थपी पनि दिन्थे– ‘बिहे पनि रिसाएरै ग¥यो होला.. अनि लास्टमा त बूढा रिसाएरै खुस्किने होला…।’
‘हा हा हा…।’ छोरी हाँसिन् । कस्ता बदमासहरु है ड्याडी ।
‘अँ त नि..।’ मेरो सहमति । हुन पनि बद्रि, गोपाल, सरोज यस्ता उटिंगा कुरा गर्न खप्पिस थिए ।
‘त्यसपछि ड्याडी ?’ छोरीको जिज्ञासा ।
मैले सुरू गरेँ–
झा सर कक्षामा पस्नेबित्तिकै कुनै मालिकले नोकरलाई आदेश दिएझैं भन्यो– ‘रे, हरिया ! जो रे बौवा एगो कुर्ची ले आ..।’
‘यो भनेको के हो नि ड्याडी ?’ छोरीले बुझ्न चाही तराईको भाषा ।
‘सरलाई बस्ने कुर्ची मागेको नि ।’ मैंले अथ्र्याएँ ।
‘ए…!’ छोरीले बुझी ।
म भन्दै गएँ–
सर भित्र पस्नेबितिकै हामी सास दबाएर बस्यौँ । सरचाहिँ लठ्ठीले बेञ्चको छेउमा हान्दै कक्षामा अगाडि पछाडि गर्दै हिँडिरह्यो । लठ्ठी जतिपटक बेञ्चको छेउमा बज्रिन्थ्यो, हामी उति नै पटक झसङ्ग झसङ्ग हुन्थ्यौँ ।
‘बदरी !’ एकछिनपछि सर बोल्नुभो– ’चल् रे बौवा ! आज् तोहार पाली छ, कथा सुनाउने ।’
मसँगै बसेको बद्रि डराउँदै जुरूक्क उठ्यो । नियमै त्यस्तै थियो– आए नि नआए नि नाम आउनेबित्तिकै जुरूक्कै उठ्नपर्ने ! थाहा छ नानी ! बद्रि, गोपाल, सुनैना, भीमसेन, हरि, अनिताचाहिँ पढाइको हिसाबले अति कमजोर । त्यसमा पनि भीमसेन बिष्ट । एकदिन त जाँचको बेलामा मलाई पछाडिबाट कोट्याएर के सोधेको भीमसेनले था’छ ? ‘ओइ छिरिङ ! आज केको जाँच हो ?’ रे ! अनि मैले नि जिस्केर भन्दिएँ– ‘तँ मूला पास हुन्न क्यारे, लेख न जे लेखे नि हुन्छ..!’
हा..हा..हा..! ड्याडीको साथी ! छोरी मज्जाले हाँसी । ‘अनि उसले के भन्यो नि ?’ छोरीको प्रश्न ।
के भन्नु नि.. उसलाई पढ्नै मन नलाग्ने रे । स्कुल जान मनै नलाग्ने रे । उसलाई त खेलाडी बन्न मन लाग्ने रे । दौडिने खेलाडी, बैकुण्ठ मानन्धरजस्तो के !
‘अँ त नि, आफ्नो मनले चाहेको कुरा गर्न पाए पो..!’ छोरी पनि भीमसेन विष्टतिर ढल्की ।
‘अनि के भो ड्याडी ?’ उनले कथाको निरन्तरता चाहिन् ।
‘त्यसपछि’ म अगाडि बढेँ– हरिया कुर्ची लिएर ढोकामा उभिन आइपुग्यो अनि भन्यो– ‘माड्साब ! हम भितर आँई ?’ झा सर केही नबोली हरियाको नजिक जानुभो, कुर्सी लिनुभो र कुर्सी ब्ल्याकबोर्डनजिकै राख्नुभो र सेतो धोती सम्हाल्दै देब्रे खुट्टामाथि दाहिने खुट्टाको भार बिसाउँदै कुर्सीमा घचक्क बस्नुभो । हरिया फेरि बोल्यो– ’माड्साब ! भितर आँई ?’ सरले हरियालाई केही वास्ता गर्नुभएन । हरि मूर्तिझैँ त्यहीँ उभिरह्यो । बरू, सर बद्रितिर हेर्दै बोल्नुभो– ‘भन्न रे बदरी ! कि तँलाई आउँदैन ?’
यता बद्रिको अनुहारचाहिँ भदौरे मकैको बोटजसरी सुकिसकेको थियो । हामीलाई मात्र हैन, सरलाई पनि थाहा थियो– बद्रिले कथा, त्यो पनि लाइन वाई लाइन भन्न सक्दैन भनेर । सरले त्यसपछि हातको लठ्ठी हावामा दुईपटक तल–माथि धसार्नुभो । यसको अर्थ बद्रिले बुझ्यो र उ सरासर सरको अगाडि उभिन गयो र दुवै हात फैलायो । सरले अरु दिनमा झैँ पिटेनन्, बरू छोटो भाषण दिनुभो– ‘तेरो दिमागमा के छ रे ? कि रित्तो छ ? रित्तो त पक्कै छैन । नत्र, पढेको कुरा त बस्नुपर्ने ! ‘दिमाग’ भन्ने बेलामा सरले बद्रिको कञ्चटमा मज्जाले लठ्ठीले घोच्नुभो । बद्रिले आफ्नो सन्तुलन गुमायो र २–३ पाइला पर सर्न पुग्यो ऊ ।
सायद् झा सर चेक गर्दै थियो– बद्रिको खोपडीभित्र के छ ? भनेर । ठीक त्यसैगरी जसरी माहुरीको चाकामा मह छ कि छैन ? भनेर सिन्काले घोचेर हेर्छ । मान्छेको दिमाग खप्परले नढाकी कुनै कोमल छिद्रयुक्त वस्तुले ढाकेको हुँदो हो त झा सरले सबैको दिमागमा ससाना लठ्ठी घुसाउँदो हो, अनि भन्दो हो– तेरो दिमागमा गोरूको गोबर छ, तेरोमा भैँसीको छ, तेरोमा नालीको कचरा छ..या भन्दो हो– आहा ! तेरोमा त खुदो छ, घिउ छ, नौनी छ.. आदि आदि ।
‘अँ, ड्याडी ! अस्ति जगत सरले नि त्यस्तै गरी हाम्रो क्लासको महेशलाई लठ्ठीले घोचेको.. लठ्ठी चिप्लेर कानमा घाउ भाको.. रगतै आको..! …अनि, दुर्गेशलाई होमक् नघोकेको भनेर क्या पिट्नु भाको.! कानको जाली नै फुटेको रे..! अँ, अनि के भो ड्याडी त्यसपछि ?
छोरी सुतेकी छैन थाहा पाएँ, र म फेरि अघि बढेँ ।
त्यसपछि झा सरले बद्रिलाई खाऊँलाझैं गर्दै पाइतालादेखि टाउकोसम्म हेर्नुभो र निधारभरि रिसको मुजा जम्मा पार्दै सोध्नुभो– ‘हिजो शनिबार ! पढिस् कि चरा मार्न गइस् ? जंगल जंगल कि खोपी, तास खेलिस् ?’
‘गोठालो गाको माड्साब ।’ डराइडराई बोल्यो बद्रि ।
‘केको गोठालो ? भैँसीको कि बकरीको ?’ झा सर बद्रिको पछि लाग्नुभो ।
‘गोरूको माड्साब ।’ बद्रि भुँइतिर हेर्दै बोल्यो ।
‘हँ.., तँ गोरूको संगत गर्छ त कहाँ विद्या आउँछ ?’ झा सर बोल्न थाल्यो– तेरो यो दिमाग छ नि, पूरै गोरूको जस्तो भैसकेछ, बुझिस् ? एउटा कुरा बुझिहाल्– मान्छे जसको संगत गर्छ नि, त्यस्तै भैहाल्छ ! भन्त, तँ के खान्छस् ? दूध, भात, छाछ, माछा, मासु खान्छस् कि त्यै गोरूजस्तो घाँस खान्छस् ? अरे, म कति बार बोलेछु कि अरु दिनमा भन्दा शनिबार डबल पढ्न पर्छ, बुझिस् ? यो मेरो नियम छ । अरु दिन २ घन्टा त, शनिबार ४ घन्टा ।
झा सर त्यसपछि जुरूक्क उठ्नुभो, कुर्सीबाट । सबैलाई हेर्नुभो र भन्नुभो– ‘ए ! सब्जन् बुझिहाल ! यो दुनियाँमा सबसे सजिलो काम के छ ? पढाइ..! अनि सबसे गाह्रो काम के छ ? त्यो पनि पढाइ ! सुन.. किन ?? म भनिहाल्छु ।
जसले पढाइमा मन लाउँछ र जसको मन पढाइमा रमाउँछ, उसका लागि पढाइ जलेबी ! अनि जसको मन गुच्चा, खोपी, गोरूमा छ, त्यसका लागि पढाइ फलामको चिउरा ! अरे, गोरूहरु ! हामी मान्छे छ रे । कुनै जानवर छैन । कुनै जानवरले पढेको हेरेको छ तिमीहरुले ? कुनै ढुंगा, मुढा पढ्न सक्छ ? तर, तिमीहरु यो कुरा बुझ्दैन । के म तिमीहरुलाई ५०–५० किलोको ढुंगा बोक्न लाछु ? गधा बनाएछु ? त्यै कथा, कविता घोक्न लाएछु..!’
झा सर ६ दिनमा ५ दिन यसैगरी पढाउनुहुन्थ्यो । एकदिन मात्र किताब पढाउनुहुन्थ्यो र त्यही एकदिनमा एउटा पाठ सकाउनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो– ‘हेर त ! पढ्न कति सजिलो छ..!’ बाँकी ५ दिन प्रायः गाली गरेर, पिटेर, आफ्नो कुरा गरेर समय बिताउनुहुन्थ्यो । सरलाई एउटै कुरा पटकपटक भन्दा झर्को र थकाइ नलाग्ने अनि हामीलाई भने त्यही कुरा सुन्दा वाक्क र दिक्क लाग्ने !
जब सर हामीलाई ‘पढ्नुपर्छ, ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ’ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो, संस्कृतका श्लोकहरु खररर सुनाउनुहुन्थ्यो– लाग्थ्यो, उहाँ संसारकै सबैभन्दा ठूलो विद्वान हुनुहुन्छ । उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ । सबै कुरा आउँछ । सबै प्रश्नको जवाफ उहाँसँग छ । सबै समस्याको समाधान उहाँसँग छ । कता कता लाग्थ्यो– बद्रि, भीमसेन, रामबाबु, सुनैनालाई किन पढ्न आउँदैन ? पढेको कुरा किन बिर्सन्छ ? यसको उत्तर पनि सरसँग छ । र, कहिलेकाहीा लाग्थ्यो– म पनि सरजसरी नै भागेर बनारस जान्छु, टुप्पी बाँधेर पढ्छु र सरजस्तै विद्वान् बन्छु । तर, जब उहाँ विद्यार्थीहरुलाई आँखा चिम्लेर पिट्नुहुन्थ्यो, औँलाका हड्डी फुटाल्नुहुन्थ्यो, लाग्थ्यो– सर संसारको सबैभन्दा खराब, मूर्ख, घमण्डी र गफाडी मान्छे हो । म सरजस्तो कहिल्यै बन्नेछैन ।
‘अनि त्यसपछि के भो ड्याडी ?’ छोरीले फेरि प्रश्न गरिन् ।
त्यसपछि झा सर झन् राँकिँदै भन्नु भो– ‘अरे गोरूहरु ! सबको दिमाग हुन्छ रे । मकैको बीउ बोरामा राखेर उम्रन्छ कि बारीमा छरेर ? दिमाग पनि त्यस्तै छ रे । पढ्.. मज्जाले पढ् । खुब पढ् । रमाएर पढ् । कहिले डरले पढ् । कहिले करले पढ् । रोएर पढ् । हाँसेर पढ् । बाटोमा पढ् । बारीमा पढ् । घरमा पढ् । जंगलमा पढ् । तर पढ्..। मलाई पढाइ चाहियो, पढाइ..! समा किताब.. अनि घोक् । हामी बनारसमा घोकेजस्तो…!
‘अनि के भो त्यसपछि था’छ ?’ मैले छोरी सुतेको छ कि छैन ? विचार गरेँ ।
‘भन्नू न, अनि पो थाहा हुन्छ ।’
थाहा पाएँ, छोरी सुतेको छैन रहेछ भन्ने कुरा ।
‘ए छिरिङ ! भन्त रे कथा.. अनि दे दनक यो गोरूलाई !’ रे…, सरले !
‘नियम पनि कस्तो भने जसले भन्छ उसले भन्न नसक्नेलाई पिट्नपर्ने, नत्र आफैँले पिटाइ खानुपर्ने !’
‘अनि ड्याडीले कथा भन्नु भो त ?’ छोरीको जिज्ञासा !
‘धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो, कुनै जंगलमा एउटा सिंह बस्थ्यो । सिंह बूढो भएपछि सिकार गर्न नसक्ने भयो र उसले पालैपालो अरु जनावरहरु आफू भएकै ठाउँमा आउनुपर्ने नियम बनायो । यो देखेर एउटा खरायोले जुक्ति निकाल्यो । र, बूढो सिंह इनारमा खस्यो । यसरी उक्त खरायोको बुद्धिले सबैको ज्यान बच्यो ।’
खररर यसैगरी भन्देकोन्त..!
‘आहा… यस्तै कथा भन्नू न बरू.. !’ छोरीको नयाँ माग ।
‘पख, एकैछिन सकिन लाग्यो, अब ।’ छोरीको मागलाई पन्छाएँ ।
खरायो र सिंह कथा भन्न मलाई न नारायणी नदी तर्न जस्तो गाह्रो लाग्यो, न सिमलको रुख चढ्न जस्तो नै गाह्रो भो । तर, बद्रिको लागि भने त्यही कथा समुद्र तर्न र सगरमाथा चढ्न भन्दा गाह्रो भएको थियो । म पनि कहिलेकाहीँ सोच्थेँ– उसको दिमागमा के छ ? या के छैन ? पढेको कुरा ऊ किन सम्झन सक्तैन ? नपढ्ने हैन, पढ्ने नै हो, ऊ । सायद् मैंलेभन्दा बढी पढ्थ्यो ऊ । गीत र स्वस्थानी व्रतको कथा त फरररर भन्न सक्थ्यो, ऊ । तर, किताबको कुरा ?..उफ्..!
‘गोरूको संगत गरेर गोरूको जस्तो दिमाग भाको रे !’ मलाई थाहा छ– बद्रिले सबैभन्दा बढी संगत गरेको भनेको मेरै थियो । स्कुल जाँदा, आउँदा सँगै । स्कुलमा, घरमा, गोठालोमा खेल्ने पनि सँगै । घाँस काट्न जाँदा, हाटबजार जाँदा, पौडी खेल्न जाँदा पनि सँगै । अझ भएन, कक्षामा पनि एउटै बेञ्चमा टाँसिएर..! संगतले गुण सर्ने भए बद्रि म र मचाहिँ बद्रि भैसक्थेँ । तर, त्यस्तो भएन । नहुने रहेछ । शरीर टाँसिए पनि दिमाग नसाटिँदो रहेछ । हरेक व्यक्ति फरक रहेछ । कोही कसैसँग नमिल्ने रहेछ । मजस्तो व्यक्ति यो पृथ्वीमा म मात्र हुँ । यदि पृथ्वीबाहेक यो ब्रह्माण्डको कुनै ठाउँमा ‘मान्छे’ छ भने पनि म कसैसँग मिल्दैन । मजस्तो अरु छैन । हुनै सक्तैन । किनकि, मेरो जन्म गराउने मेरी आमाको त्यो डिम्बकोष र मेरो बाबाको त्यो शुक्रकीटकोष अरु कसैसँग छैन र मेरो आमा र बाबासँग पनि अब त्यो छैन । त्यसैले म, म नै हुँ र बद्रि, बद्रि..!
‘अनि त्यसपछि के भो था’छ, नानी ? त्यसपछि झा सरले भन्नुभो– ‘रे.., छिरिङ ! धर् रे लाठी… अनि ठोक् यो गोरूलाई ।’
म धर्मसंकटमा परेँ । बद्रि मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी । उसको अनुहार हेरेँ । ऊ एउटा अपराधीझैँ दुवै हात मतिर फैलाएर चुपचाप उभिएको थियो । म आफू गोरू बन्न पनि चाहिनँ र पिटेँ गोरूलाई झैँ । मनमनै गनेँ, २८ छडी भएछ । सायद् उसले पनि गन्यो होला । मेरो हात र मन थाक्यो । सायद् उसको पनि । तर ऊ केही बोलेन । ‘सर ! हो गइल् !’ म बोलेँ ।
त्यसपछि झा सर बाहिरिनुभो, ढोकामा अघिदेखि उभिरहेको हरिलाई खाऊँलाझैँ गरी हेर्दै । त्यसको लगभग १५ मिनेटपछि हाफटाइमको घन्टी बज्यो । सबै जना ह्वारह्वार्ती बाहिर निस्के, हल्ला गर्दै । कोही गुलमोहरको फेदमा जम्मा भए– चना, चिउरा, पुष्टकारी, बरफ खान अनि कोहीचाहिँ सरहरुको आँखा छल्दै गुच्चा र खोपी खेल्न हात्तीसारतिर दौडे । मचाहिँ फुटबल खेल्न चौरतिर दौडेँ । फुटबलको पछि पछि दौडिँदै थिएँ, अचानक बद्रिको याद आयो । हेरेँ यताउति, देखिनँ । हात्तीसार, गुलमोहरको फेद, पसलहरुमा खोजेँ तर भेटिएन । त्यसपछि फर्कें आफ्नै कक्षा कोठामा । ऊ सुँक्क सुँक्क गर्दै थियो । आँखाहरु रातो भएको थियो । बोलाएँ । बोलेन मसँग । मनले अशुभ सोच्यो– झा सरको पिटाइ खाएर शंकर र रामशरणले जसरी नै बद्रिले पनि पढाइ छोड्यो भने !
नभन्दै त्यसको भोलिपल्टदेखि ऊ कहिल्यै स्कुलमा देखा परेन । मलाई लाग्यो– झा सर बद्रिको लागि खरायो हो र बद्रि स्वयंचाहिँ सिंह । खरायोले सिंहलाई इनारमा खसाएरै छोड्यो ।
…सुन्नेलाई सुनको माला
भन्ने बेलामा मुखमा
‘नानी… ! नानी… ! ओहो, यही हो कथा सुनेको ?’
छोरी निदाएकी जस्तो लागेसि बोलेँ म ।
‘कथा सक्यो ड्याडी ? म त भुसुक्कै निदाएछु । लास्टमा के भो नि ?’ छोरीले कथाको अन्त्य सोधिन् ।
‘लास्टमा कथा सक्यो । ल जाम् सुत्न । लाइन साइन आउँदैन अब ।’ योचाहिँ उर्मिलाको आवाज ।
त्यसपछि सबै जना सुत्न लाग्यौँ ।
जडीबुटी प्रशोधनमा ध्यान देऊ